Nanome fanampiana sy nivavaka i Pakistan amin’ny ady mafy amin’ny COVID-19 atrehin’i India · Global Voices teny Malagasy
Samy naneho firaisankina ny mpisera Twitter andaniny sy ankilany
Voadika ny 03 Jona 2021 3:33 GMT
Pakistan sy India. Sary avy amin'ny Grubb tao amin'ny Wikipedia. CC BY-SA 3.0.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay, nahitana ny fiakaran'ny tahan'ny COVID-19 sy ny taham-pahafatesana tany India, nasongadin'ny vaovao izany tamin'ny tsy fahampian'ny oksizena tany amin'ny hopitaly sy ny sary mampiseho ny fandoroana faty mitandahatra. Tamin'ny 29 Aprily, nahitana tranga vaovaon'ny COVID-19 miisa 379.257 tao India izay betsaka indrindra manerantany ary maty miisa 3.645 tao anatin'ny 24 ora, raha nilaza kosa ny manam-pahaizana fa mety mbola betsaka kokoa noho io isa ofisialy io ny tarehimarika tena izy.
Raha sahirana tamin'ny fifehezana ny krizy i India tamin'ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana dia nitady fanampiana tamin'ny tambajotra sosialy ny Indiana tamin'ny fanafody ilaina sy ny oksizena. Nisy ny fanohanana sy ny fanampiana ara-bola avy amin'ny governemanta tsy nampoizina: avy amin'i Pakistan mpifanolo-bodirindrina aminy, izay efa nanana fifandrafiana tamin'i India hatry ny ela.
Raha mbola tsy namaly ny tolotr'i Pakistan i India dia naneho firaisankina ny mpisera Twitter avy min'ny andaniny roan'ny sisintany ka nahatonga ny tenirohy maneho finamanana malaza toy ny #PakistanStandsWithIndia (Manohana an'i India i Pakistan), fihetsika tsy fahita firy eo amin'ny fanjakana roa tonta. Nisaotra an'i Pakistan noho ny fanohanany ireo mpilalao sarimihetsika Indiana sasany.
Nanana fifandraisana misafotofoto sy sarotra noho ny ady manan-tantara sy ny satan'ny fitaovam-piadiana nokleary ireto mpifanolo-bodirindrina Aziatika Tatsimo ireto, India sy Pakistan. Niharatsy noho ny krizy tao Kashmir, satria samy nitaky izany ny firenena roa tonta, ny fikasana teo aloha hamerenana indray ity fifandraisana ity. Noho izany, nahazo fankasitrahana marobe niaraka tamin'ny tenirohy lasa nalaza be #PakistanStandsWithIndia ny fanohanan'ny olom-pirenena Pakistaney nandritra ny fotoanan'ny krizy tao India.
Nampita hafatra momba ny “maha-olombelona aloha” ny Minisitry ny Raharaham-bahiny Pakistaney, Shah Mahmood Qureshi, nilaza tamin'ny 24 aprily fa hanome fanampiana fitaovana toy ny ventilateur, Bi-PAP, milina fitiliana nomerika X-ray ary fitaovam-piarovana manokana.
Tao anatin'ity adin'i Pakistan tamin'ny COVID-19 ity dia olona miisa 815.711 no mitondra ny tsimokaretina ary 708.193 no sitrana raha 17.680 kosa no maty tamin'ny taon-dasa. Hatreto, vaksiny miisa 1,84 tapitrisa no efa nataon'i Pakistan ary fatrana vaksiny miisa iray tapitrisa hafa kosa no nafarana an'habakabaka avy any Shina.
Rehefa nalaza be ny tolon'ny Indiana tamin'ny COVID-19 dia nihetsika tamin'ny fitadiavana fanampiana ny Indiana tamin'ny fampiasana ny Google spreadsheets, nanamafy ny feo tao amin'ny tambajotra sosialy ho fanampiana sy nanangana tambajotra firaisankina.
Nidera ireo ezaka ireo i Usama Khilji, talen'ny Bolo Bhi, fikambanana mpikaroka ny zo nomerika tamin'ny filazany hoe:
Mampientam-po ny mahita ny tenirohy malaza #IndiaNeedsOxygen (Mila Oksizena India) sy ny #IndianLivesMatter (Mendrika ny miaina ny Indiana) tany Pakistan. Mampiseho fa manana fikasana tsara ny olona
Henatra ho anao Faisal @FEdhiOfficial, maty ny Kashmirita nefa manolotra fanampiana ho an'ny olona mpamono azy ireo ianao, nahazo laza sy voninahitra izay nilainao ianao. Anarana manana ny hajany ny Edhi ka tokony dinihinao aloha ny fihetseham-pon'ny Kashmirita
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Vishal Manve.